Van Gaz 2217 "Barguzin" libhekisela ozala "Sable" futhi eyayenziwa ngesikhathi Gorky Automobile Plant ngo-1999, unyaka. Kwaba evenini isizukulwane sokuqala. Ngo-2003, unyaka kukhicite buyekeza design global kanye ezibekiweko lobuchwepheshe, libhekisele kuwo wonke ekhona ngesikhathi amamodeli ukushintshwa Gaz. Futhi "Barguzin" kwaba okufanayo. Kusukela ngaleso sikhathi, yaqala ukukhiqiza isizukulwane wesibili Gaz 2217.
Ukuhlela kanye ukuguqulwa
Okwamanje kukhona 4 izinhlobonhlobo zezinto ezintsha. Lawa imodeli ezimbili monoprivodnom Gaz evenini kanye ezimbili-wheel drive. Kodwa eqinisweni, zonke zibe podmodifikatsy ezimbalwa kakhudlwana. Basitshela ikakhulukazi izici zomzimba. Phakathi umndeni omkhulu GAS 2217 ungakwazi ukuhlukanisa amasethi ephelele eziyishumi. Abakwazi anakekele abagibeli amahlanu noma ayisithupha, abe uhlobo oluhlukile drive futhi headroom (2.1 kuya 2.2 amamitha).
Kukhona "okunethezeka" yesimiso somhlangano evenini, ifakwe zonke izinsimbi ezidingekayo kanye kuzwakala induduzo ephelele abagibeli. Ngakho, kuba eqolo phakathi kwazo zonke ezinye izinhlobo onobuhle.
Gaz 2217 Design ngempela kumnandi futhi ezithakazelisayo, abakushoyo, ukubuyekezwa eziningi abashayeli. uchungechunge Ikakhulukazi akachazeki entsha amancane kusukela 2003 kuqhubeke. phambi ingxenye yayo has izibani lefanele, ungalibalekeli ezinkulu, Izinsimbi entsha chrome indlela entsha ngemuva umbono izibuko. By the way, ngokungafani isizukulwane esedlule, ziye zaba obusebenzayo ngaphezulu - baye esakhelwe amasignali ithuba nezibuko eshubile. Ngaphezu kwalokho, kungase kushintshwe ngokusebenzisa idrayivu. emisha okunjalo baziswa abanikazi abaningi Gaz 2217. Kodwa ezifana ukusebenza izibuko yayinesithiyo esisodwa - izindleko ezinkulu (uma kungukuthi kabana, udinga ibhaxa ukuphuma ku-ruble ayizigidi eyodwa).
Yini unyakaza Ukucaciswa izinjini, yonke into ilula. Umshini usuphothuliwe ngezinhlobo ezimbili zamakhiwane izinjini - carbureted ZMZ 405 ngokukhiphayo of 123 amahhashi futhi iyunithi anamandla yokukhiqiza American "Chrysler". umthamo Its 133 amahhashi. Ukuze uthole evenini lokho kwanele ukuthuthukisa ijubane amakhilomitha 110 ngehora. Abanye ukucupha nakho kwakudala injini diesel, "Cummins". Zonke lezi izinjini abasebenza ndawonye eyodwa yokudlulisela - a gearbox ezinhlanu-speed.
Kuyaphawuleka ukuthi ngokwesilinganiso uphethiloli ukusetshenziswa of eseyintsha umjikelezo we "idolobha-umgwaqo omkhulu Umuzi" amalitha ngamunye amakhilomitha 100 bengekho ngaphezu kwama-12. Ukuze imoto alesi sigaba kuyinto izinga eyamukelekayo ngempela.
Omunye izici eziyinhloko Gaz 2217 - aphansi. evenini okusha kule nguqulo eziyisisekelo angathengwa ruble ayizigidi 460. A lesibili ngesandla GAS (mayelana 2006-2007 imodeli ngonyaka) zingathengwa for ama-ruble ayizigidi ezingu-200.
Mayelana Gaz 2217 Sobol "Barguzin" izimpendulo bukhomba ngokubona efanayo: lo mshini uphelele uhambo ezisemadolobheni kanye suburban. I negative kuphela, esivela kuzo zonke onobuhle Gorky - lena abampofu kakhulu izinga Yakha futhi sengozini omzimba ukugqwala. Nokho, lokhu akusho inciphe udumo lwawo.
Uyini umthwalo wemfanelo Realtor?
Stiv Dzhobs (Steve Imisebenzi): umlando wokuphila futhi ukudalwa corporation Apple edume kakhulu
Amafutha izinwele: ukukhula kanye kwabantu. zokupheka Traditional imikhiqizo izinwele
Indlela ukuhlukanisa uju zamanga amakhowe agaric kusukela Ukwenza Okungcono
Apple cider uviniga ka cellulite, izibazi kanye varicose emithanjeni.
Indawo yokudlela "Esikhalayo Willow" (eMoscow): incazelo, imenyu, ukubuyekezwa